Mmemme Mgbochi Ọdịda Maka Ndị Agadi | Ngwọta OMG
Usoro Mmechi Mgbochi Maka Okenye
Ihe ka ọtụtụ n'ime mmerụ ahụ ndị okenye na-akpata kpatara ya. Nke a nwere ike iduga nkwụnye mgbagha, ọkpụkpụ ọkpụkpụ na ọtụtụ ihe ize ndụ ndị ọzọ.
Iji zere ọdịda ndị AAOS (American Academy of Orthopedic Surgeons) amalitela ọtụtụ mmemme nke ga-enyere aka melite nkwụsi ike, ike, nkwekọrịta, na ịba uru.
Programsfọdụ mmemme mgbochi ọdịda nke ga - enyere aka n'ibelata ọdịda -
Ihe gbasara nha
Nke a bụ usoro ihe omume nke 8 bụ nke ebumnobi ya bụ iji belata egwu nke ịda. Ọzọkwa, ebumnobi a na-eme ka ọkwa mmadụ dịkwuo elu.
Mgbe ị sonyere usoro a ị ga-amụ banyere ihe ize ndụ ndị dị na mpụga, otu esi nagide ha. Nke a ga-enyekwara gị aka ịzụlite ike anụ ahụ, na-enwe ahụ ike na, ị ga-enwe ike ịhụ ọdịda dị ka ọ nwere ike ịchịkwa.
Otago na-eme mmemme
Ihe mmemme Otago dabeere na nkwụsị 17 na ike ike nke onye na-agwọ ọrịa na-ahụ n'ụlọ gị. Site na itinye ihe ndị a kụziri na usoro a, ị ga-enwe ike ibelata ọdịda n'etiti 35 - 40%. Nke a bụ usoro sitere na 6 - 12 ọnwa.
Tai Chi maka ọrịa ogbu na nkwonkwo
Tai Chi bụ otu n'ime mmemme kachasị mma maka ọgwụgwọ ọrịa arthritis. Tai Chi na-achọ ime ka ike, mgbanwe, ume, nguzozi na ọtụtụ ndị ọzọ.
Usoro nkwado nke Tai Chi na-akwado ọtụtụ ntọala ahụike n'ụwa nile. Nke a na ọtụtụ DVD, ma 15,000 kụziiri ya ezigbo ndị nkụzi zuru ụwa ọnụ.
Ebumnuche nke usoro a bụ iji nwee obi ike n'etiti ndị okenye. A malitere usoro a n'Australia. A chọpụtara na usoro a mere ka 30% belata na ọdịda. Ebumnuche nke usoro a bụ iji gbochie ọdịda ma wulite ike na nguzozi site na itinye ndị mmadụ aka na mgbochi mgbochi.
Site na itinye aka na mmemme a, ị ga-amụta banyere ọdachi dị iche iche na-ada, otu esi egbochie ha. Ọzọkwa, ị ga-enwe ike inyere ndị ọzọ aka site n'ịkọrọ ha ihe ọmụma na ahụmahụ gị.
Usoro nke Tai Ji Quan: Ịkwaga maka nhazi dị mma
Nke a bụ usoro ihe omume 24 bụ nke a na - enye site na abụọ - otu ọzụzụ ọzụzụ oge ọ bụla. Usoro a bụ ngwakọta nke mmegharị ahụ ọkụ na-enye m obere oge ọgwụgwọ na-esochi mmega ahụ dị mkpirikpi.
Nọgide na-arụsi ọrụ ike ma nweere onwe gị maka usoro ndụ (SAIL):
Nke a bụ usoro ihe omume nke na-agụnye ịzụlite mmanụ na iche iche ahụ na-ewusi ike ma na-emezi ahụ. Usoro ihe a bu n'uche inye ntule onwe onye tinyere ihe omumu nke ga - enye omuma omimi banyere omuma na okenye na otu esi egbochi ha.
Ya mere, ihe ndị a bụ ụfọdụ n'ime mmemme ị nwere ike ime na ndụ gị kwa ụbọchị ka ị dịrị mma ma dị mma.
Nzuzo 11684 5 Echiche Taa